အစ္စရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာများက လိမ်လည်ထားတဲ့ အချက်၁၀ ချက် - News @ M-Media
အစ္စရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာများက လိမ်လည်ထားတဲ့ အချက်၁၀ ချက်
in နိုင်ငံတကာသတင်း — August 3, 2014
သြဂုတ် ၃ ၊ ၂၀၁၄
ဘယ်ဂျီယမ်စာရေးဆရာ၊ ဂျာနယ်လစ် ဖြစ်သူ Michel Collon က အစ္စရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆယ်စုနှစ်ချီ ကမ္ဘာကို လိမ်လည် ခဲ့တဲ့ ဥရောပမီဒီယာတွေ အကြောင်း ဝေဖန်ပြစ်တင် ရေးသားထားတဲ့ Israel, let’s talk about it,အမည်ရ စာအုပ်ကိုရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ သူ့စာအုပ်မှာ ပါရှိတဲ့ အနောက် မီဒီယာများရဲ့ အလိမ်အညာ ၁၀ ခုအကြောင်း ကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ပထမ လိမ်လည်ထားတဲ့ အချက်ကတော့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျုးတွေအစုလိုက် အသတ်ခံလိုက် ရတဲ့အတွက် အစ္စရေးနိုင်ငံကိုထူထောင်ပေးခဲ့တယ် ဆိုတာပဲ..
ဒါက မှားယွင်းနေပါတယ်..အမှန်တကယ်က ၁၈၉၇ မှာ ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မှာကျင်းပတဲ့ ပထမအကြိမ် ဇီယွန်ကွန်ဂရက် အစည်းဝေးကတည်းက ဂျူးအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေဟာ ပါလက်စတိုင်းကို လွှမ်းမိုး သိမ်းပိုက်ဖို့ ထောက်ခံအတည်ပြုပေးခဲ့တာပါ.
၂။ ဒုတိယလိမ်လည်တာကတော့ အေဒိ ၇၀ခုအတွင်းက မောင်းထုတ်တာခံလိုက်ရတဲ့ သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးသီဘင်တွေရဲ့နယ်မြေကို ပြန်လည်သွားရောက်နေထိုင်တာဖြစ်လို့ အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်တာဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ တရားဝင်တယ် လို့ ပြောနေခြင်းပါ။
ဒါက အစစ်မှန်မဟုတ်ပါဘူး..ပုံပြင်ပါ ၊အရှိန်အ၀ါကြီးကျော်ကြားတဲ့ အစ္စရေး သမိုင်းပညာရှင် Shlomo Sand နဲ့အခြား သမိုင်းသုတေသီတွေအားလုံးက အိတ်ဇိုးဒပ် လိုခေါ်တဲံ နယ်နှင်ပြောင်းရွေ့မှုဖြစ်ရပ် ဟာ မရှိခဲ့သလို သူတို့တွေ မူရင်းနယ်မြေဆီပြန်လည် ၀င်ရောက်တာကလည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ ကျွန်တေ်ာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်. .ရှေးခေတ်က ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေ တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဟာ သူတို့နယ်မြေတွေကနေ ထွက်ခွါခဲ့တာလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ပါလက်စတိုင်းမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဂျူးအနွယ်တွေကနေ ဆင်းသက်လာကြတဲ့သူတွေ ကလည်း လက်ရှိ မှာ ပါလက်စတိုင်းမှာနေထိုင်ကြ တုန်းပါပဲ ။သူတို့တွေရဲ့ မူရင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အနောက်နိုင်ငံနဲ့ အရှေ့ ဥရောပ မြောက် အာဖရိက နိုင်ငံတွေဆီ ပြန်နေ ထိုင် လိုတယ်လို့ သူတို့ကတောင်းဆိုနေကြ ပါတယ။် အစ္စရေး သမိုင်းပညာရှင် Shlomo Sand ပြောတာကတော့ ဂျူးနိုင်ငံဆိုတာမရှိပါဘူး ၊ဂျူးတွေမှာ တူညီတဲ့ သမိုင်း ဘာသာစကား ယဉ်ကျေးမှုတွေမရှိပါဘူး သူတို့ကြားမှာတူတာဆိုလို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားပဲရှိတယ်..ဘာသာတရားတစ်ခုတည်းနဲ့ နိုင်ငံ မထူထောင်နိုင်ပါဘူး လို့ ကျွန်တော်ကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်..
၃။တတိယလိမ်လည်တာက ဥရောပနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ ဂျုးရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေ ပါလက်စတိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အဲဒီအချိန်မှာပါလက်စတိုင်း ဟာ နယ်မြေခိုင်ခိုင်မာမာနဲံ သတ်သတ် မှတ်မှတ် အခြေချ နေထိုင်တာမရှိဘူး လို့ဆိုတာကလည်း တတိယမြောက် လိမ်လည်တာပါ
..အမှန်တကယ်က ပါလက်စတိုင်းဟာ ၁၉ရာစုအတွင်းမှာ လက်ယာ ထွက်ကုန်တွေကို ပြင်သစ် အပါဝင် နိုင်ငံများစွာဆီကို တင်ပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်
၄။ စတုတ္ထမြောက် လိမ်တဲအချက်က… ပါလက်စတိုင်းတွေဟာ သူတိုရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဆန္ဒနဲ့ သူတို့တိုင်းပြည်နယ်မြေ ကို စွန့်ခဲ့တာလို့ ၀ါဒဖြန့်တယ်..
ဒါပေမဲ့ အစ္စရေး သမိုင်းပညာရှင် Benny Morris. Ilen Pappe တို့ကတော့ ပါလက်စတိုင်းသားတွေကို သူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကနေ အဓမ္မ အကြမ်းဖတ်မောင်းထုတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်
၅။ သူတို့တွေထပ်ပြောနေတာက အစ္စရေးဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက တစ်ခုတည်းသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တယ် ဒါကြောင့် ကာကွယ်ပေးရမယ်လို့ ဒီနေ့ဆိုနေကြတာပါ။
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့် အမြင်အရဆိုရင် အစိုးရ ဥပဒေ တင်မက နယ်မြေကန့်သတ်မထား နယ်နမိတ်မျဉ်းမရှိတဲ့ အစိုးရက အုပ်စိုးနေကြတာပါ။ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံအားလုံးလိုလိုမှာ အခြေခံဥပေဒေအရ သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ နိုင်ငံ နယ်နမိတ်စည်မျဉ်းဆိုတာရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီလို မျိုးအစ္စရေးဥပဒေ မှာမရှိ ပါဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ အစ္စရေးက နယ်နမိတ်စည်ရှိုးမရှိတဲ့ နယ်ချဲ့ဝါဒီတွေပါ။ သူရဲ့ ဥပဒေ ဆိုတာကလည်း လုံးဝကို လူမျိုးခွဲခြားရေးဝါဒပါ .. အစ္စရေးဥပဒေအရဆိုရင် အစ္စရေးဟာ ဂျူးတွေ အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ် ဂျုးမဟုတ်တဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံသားဆိုရင် လူသား အဖြစ်နဲ့တောင်မစဉ်စား ပါဘူး..ဒီလိုဥပဒေက ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်..
၆။နောက်ပြီး အစ္စရေးကိုကာကွယ်ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းရဲ့ ဒီမိုကရေစီကို အမေရိကန်က ကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ဆိုကြပါသေးတယ်။
အမှန်က အစ္စရေးက အမေရိကန် နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ နဲ့အိမ်နီနားချင်းတွေကို ဗုံးကြဲနိုင်တာဖြစ်တယ်။ အမေ၇ိကန် ရဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ ဒိမိုကရေး ထူထောင်ရေး ဆိုတာလည်း ရေနံကို လက်ဝါးကြီးအုပ်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
၇။လိမ်လည်ထားတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ အမေ၇ိကန်က အစ္စရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်ကြား မှာ စေ့စပ်ဖြန်ဖြေပေး ဟန်လုပ်ပြပါတယ်..
ဒါကလုံးဝကို မှားယွင်းနေတာပါ.. အကြောင်းကတော့ ဥရောပသမဂ္ဂ ရဲ့နိူင်ငံခြား ဆက်ဆံရေးအကြီးကဲဟောင်း ဟာဘီယား ဆိုလာနာ အစ္စရေးကို ရည်ညွန်းပြောသွားတာရှိပါတယ် .
“ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ ၂၁ ခုမြောက်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်..” လို့ဆိုခဲ့တယ်.နောက်ပြီး
ဥရောပမှာရှိတဲ့ လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးတွေက အစ္စရေးစစ်ဘက် လက်နက် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းနေသလို ပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပါလက်စတိုင်းတွေ တရားဝင်ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားတဲ့ ဟားမတ် အစိုးရကို ဥရောပက အသိအမှတ် မပြုပါဘူး ဒါ့အပြင်သူတို့က ၂၀၀၈က ဂါဇာ တိုက်ခိုက်မှုကိုတောင် မီးစိမ်းပြလိုက်ပါသေးတယ်
၈။ နောက်ထပ်အချက်က ဘယ်သူမဆို အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ အချက်တွေကိုပြောမယ်၊
ဒီဒေသက အမေရိကန် အကျိုးစီးပွါးကို ထောက်ပြမယ်ဆိုရင် ပြောဆိုထောက်ပြ တဲ့သူကို မျိုးရေးဆန့်ကျင်သူ လို့အသံ မထွက်နိုင်အောင်သူတို့က ပြောဆိုဝေဖန်ကြမယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အစ္စရေးကိုဝေဖန်ရဲသင့်တယ် ဒါဟာ လူမျိုးရေး မုန်းတီး အောင်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး မွတ်စလင် ၊ခရစ်ယာန်၊ဂျူး တို့မှာ တူညီတဲ့ အခွင်အရေးရှိတယ်လိုမမြင်တဲ့ ဘာသာတရား နောက်လိုက်တွေ အကြားငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ အစိုးရကို
၉။နောက်ထပ် အလိမ်အညာက အနောက်တိုင်း မီဒီယာတွေကနေယနေ့ ပဋိပက္ခ၊ပြဿနာ အရပ်ရပ် ကို လှုံ့ဆော်နေတဲ့သူတွေ ဟာ ပါလက်စတိုင်း တွေပဲလို့ စွပ်စွဲဖေါ်ပြကြတယ် ၊
ဒါကို ကျွန်တော်တို့ကအစ္စရေးတွေသိမ်းပိုက်မှုကပဲ ပဋိပက္ခပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတာကိုပြောဆိုရမယ် ။ ပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့အခွင့်အရေး၊နဲ့နယ်မြေတွေကိုခိုယူသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မူဝါဒက ပဲ ပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတာကို ပြောဆိုရမယ်။
၁၀။ နောက်ဆုံးကတော့ ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး ပြဿနာမှာ အစ္စရေးနဲ့သူရဲ့ကြံရာပါတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက နေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အမုန်းတရား ရန်ငြိုးအာဃာတ တွေကြောင့် ဒီပြဿနာအကျပ်အတည်း ကိုဖြေရှင်ပေးနိုင်မဲ့လမ်းစ အဖြေမရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်။
အဖြေတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ လူထုဖိအားနဲ့အစ္စရေးနဲ့ အမေရိကန်၊ဥရောပ၊နဲ့ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ ကြံရာပါတွေအပေါ်မှာ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ရပ်တန့်သွားအောင် လူထုကနေ ဖိအားပေးရပါမယ်.. မီဒီယာတွေကိုလည်းအဖြစ်မှန်တွေ ထုတ်ဖေါ်တင်ပြကြဖို့က လည်းဖိအားပေး ရပါမယ်.. အင်တာနက်.နဲ့အခြား သတင်းမီဒီယာတွေကနေ လည်း ပါလက်စတိုင်း အရေးကို တင်ပြသွားရမှာဖြစ်တယ်။
copy from myanmarmuslim.net
M-Media တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် တင်ဆက်ခဲ့သည့် ပိုစ်အား မဖတ်ရသေးသည့် စာဖတ်ပရိတ်သတ် အတွက် ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Tags: middle_east, Palestine